MOGE Signs Contracts with MPRL E&P for Block A-6 Project | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalMOGE Signs Contracts with MPRL E&P for Block A-6 Project
MOGE Signs Contracts with MPRL E&P for Block A-6 Project
Zin Thu Tun
State-run Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) and MPRL E&P Company signed two contracts for an offshore gas project in block A-6 on December 16, one for production sharing and the other for gas production and distribution.
Meanwhile, Union Minister of Electricity and Energy U Win Khaing soundedacaution that environmental protection and workplace safety need to be prioritized in the project’s implementation.
Block A-6, located 80 kilometers west of Pathein City, Ayeyarwady Region, includes five projects, namely Shwepyithar-1, Shweyitun-1, Pyithit-1, Pyitharyar-1 and Shweyitun-2, announced in September 2018.
These projects are expected to start commercial production by the end of 2023.
“These two contracts markasignificant milestone not only for our joint-venture partners and stakeholders but also for the citizens of Myanmar, who are the real owners of the natural resources,” said U Moe Myint, chief executive of MPRL E&P.
MPRL E&P holdsa20 percent stake in block A-6; the remaining 80 percent is equally split between Australia’s Woodside Energy and France’s Total Myanmar E&P.
The project signed on December 16 will playacritical role in meeting domestic gas demand given that production will start inashort time.
Myanmar aims to implement offshore gas projects as they are economically viable for exploration, production and distribution.
ကမ်းလွန် A-6 လုပ်ကွက်အတွက် MPRL E&Pကုမ္ပဏီနှင့် MOGE သဘောတူစာချုပ်နှစ်ရပ်အား လက်မှတ် ရေးထိုး
ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 ၏ သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများအတွက် MPRL E&P ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတို့အကြား သဘောတူစာချုပ်နှစ်ရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁၆)ရက်၌ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ထုတ်လုပ်မှုခွဲဝေခံစားခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှု ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ အချိုးအစားသဘောတူစာချုပ်နှစ်ရပ်ကိုချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး A-6 ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေးကို အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့အနောက်ဖက် ကီလိုမီတာ(၈၀)အကွာတွင် တည်ရှိသော အဆိုပါ လုပ်ကွက်အတွင်း ရှာဖွေရေးတွင်းငါးခုပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်သော ရွှေရည်ထွန်းအမှတ် – (၂) ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
“ ယခုလိုသဘောတူစာချုပ်နှစ်ရပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာဟာ၊ စီမံကိန်းနဲ့တကွ Joint Venture Partnerများ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက Stakeholder များ၊ အဲဒီအထဲကမှအရေးကြီးဆုံးမူလသယံဇာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအတွက်အထင်ကရအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု MPRL E&P ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးမိုးမြင့်က ပြောသည်။
ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် ပြည်သာတွင်းအမှတ်-၁၊ ရွှေရည်ထွန်းတွင်းအမှတ်-၁၊ ပြည်သစ် တွင်းအမှတ်-၁၊ ပြည်သာယာတွင်းအမှတ်-၁နှင့် ရွှေရည်ထွန်းတွင်းအမှတ်-၂တို့ တည်ရှိသည်။
ယင်းလုပ်ကွက်များမှ သတ်မှတ်ကာလဖြစ်သော ၂၀၂၃ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစတင်၍ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကဆိုသည်။
မြန်မာ့ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-6တွင် MPRL E&Pကုမ္ပဏီမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၂၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Woodside Energy Limited မှ(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Total Myanmar E&P မှ(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။
A-6 တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည် အချိန်တိုအတွင်း စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်၍ နိုင်ငံတော်ပြည်တွင်းသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် အထူးအားထားရမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးရေအလွန်နက်သောဒေသရှိ ကမ်းလွန် စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများတွင် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု အလားအလာ များဖြင့် စီမံကိန်းကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleRakhine State Calls for More Proposals on Planned Industrial Zone
Next articleSingapore Festival 2020 Scheduled for February